यस कारण अमेरिकामा नेपाली पुरुष रोकोरोइ र महिला हँसिला –खुशीला | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
यस कारण अमेरिकामा नेपाली पुरुष रोकोरोइ र महिला हँसिला –खुशीला
यस्तो पो दुनिया रहेछ भनि हँसिला – खुशीला
प्रकाशित मिति ६ फाल्गुन २०७५, सोमबार ११:१२ लेखक नेपाली जनता
नेपालबाट मात्र हैन बिश्वबाट नै अमेरिका आउन चाहन्छन । सबैले अवसर पाउदैनन । पैसाले अमेरिका आईदैन । भगवानको साथ हुनु पर्छ । चन्द्रमा दाहिने हुनु पर्छ । पुर्पुरोमा लेखको हुनु पर्छ । तुलनात्मक रुपमा अमेरिका आएका पुरुष भन्दा महिला अधिकासं हँसिला – खुशीला देखिन्छन । हुन् त पुरुष पनि हँसिला खुशीला नहुने चाही हैन तर महिलाहरु ज्यादा यस्तो देखिन्छन ।
अमेरिका भनेको साच्चै नै अवसरको भुमि हो । काम गर्छु भन्नु मात्र पर्छ काम नपाइने भन्ने हुदै हुदैन । जुनसुकै उमेरका पुरुष तथा महिलाले पनि काम पाउन सक्ने देश नै अमेरिका । अमेरिकामा महिला किन हँसिली खुशीली देखिन्छन भने जीवनमा कहिले काम नगरेको महिलाले पनि अमेरिकामा डलर मौकामा कमाउछन । अनि हँसिली खुशिली नहुनु भन्ने त कुरै भएन । कमाईको कारण महिलाको अनुहार सदैब उज्यालो हुन्छ ।
कहिले काम नगर्ने या नलगाईएको या काम गर्ने अवसर नपाएका महिलाले अमेरिकामा आम्दानी भए पछि आर्थिक रुपले बलिया हुन्छन । महिलामा आर्थिक सशक्तिकरण हुन्छ । नेपालमा चुला चौका गर्ने महिला अमेरिकामा बाहिर दुनिया देख्दछन । उनीहरु नेपालमा झ्याल खानामा बसी झैँ हुने भएता पनि अमेरिकामा हरेक कुरामा स्वतन्त्रता हुने हुनाले महिलाले सिक्ने मौका पाउद्छन । यस्तो पो दुनिया रहेछ भनि हँसिला – खुशीला हुन्छन ।
अमेरिकामा महिलाले पनि काम गर्नु पर्ने र कमाउने बाटो हुनाले नेपालमा जस्तै पतिले दिए भने घर चल्ने हुदैन । लोग्नेले दिए भने मात्र लुगा किन्ने ,नदिए नकिन्ने भन्ने कदापी हुदैन । अमेरिकामा कमाई हुनाले आफुले चाहको जस्तो निर्धक्क साथ किन्न पाईने हुनाले महिला त्यसै हँसिला –खुशीला देखिन्छन र हुन्छन ।
नेपालमा रहुन्जेल सदैब भाडा माझ्दा माझ्दा हैरान भएको अवस्थामा अमेरिकामा त्यो गर्नु पर्दैन । खान मज्जा आएता पनि भाडा मोल्नु पर्दा टाउको दुख्छ तर अमेरिकामा ठुला भाँडा अधिकाश पुरुषको भागमा पर्ने हुनाले महिलालाई केहि राहत भने चै हुन्छ । यन्त्रले भाडा माझि दिन्छ । अनि हँसिली खुशीली नहुने कुरै भएन । नेपालमा पानीको समस्या र त्यो पद्धति सबै ठाउँमा नहुने हुनाले अमेरिकामा भाडा माझ्ने नै यन्त्रले हो ।
नेपालमा नदि ,नला ,नहर ,धारा ,ढुंगे धारा आदिमा लुगा धुँदा धुँदा हैरान र कायल परेका महिलालाई अमेरिकामा स्वर्ग भएको छ । लुगा यन्त्रले धुने भए पछि घुंडा दुख्ने जिउ दुख्ने सवाल नै हुँदैन । यस्तो कठिन काम बाट मुक्त भए पछि महिला त्यसै हँसिला – खुशीला हुन्छन । मन नै प्रसंन्न भएको देखिन्छ ।
नेपालमा सदैब बच्चा आमाले मात्र हेर्ने हुनाले अमेरिकामा पुरुषले आमा जस्तै हेरी दिन्छन । पाठशाला पुरयाई दिन्छन । त्यहाँ पनि महिला मुक्त र स्वतन्त्र हुन्छन अनि भित्र देखि मन देखि खुशी हुन्छन । अधिकांस महिलाहरु हँसिली खुशीली देखिन्छन ।
अर्को कुरा ,अमेरिकामा पुरुषले नेपाल जस्तो महिलालाई हेप्न पाउदैनन । बरु महिलाले हेप्छन पुरुषलाई । केहि गर्न कानुनले दिदैन । अलिकति यताउति गरे भने प्रहरी पनि बोलाईञ्छ । अनि महिलालाई साह्रै आनन्द हुन्छ । अनि हँसिला – खुशीला हुन्छन ।
अर्को कुरा पुरुषले नेपाल जस्तो आफु मात्र बाहिर जाने चलन हुदैन साथमा पत्नीलाई पनि संगै लाने चलन हुन्छ । त्यहाँ पनि महिला खुशी हुन्छन । आनन्द हुन्छ महिलालाई । किनमेलमा जाँदा पनि भरि बोक्नको लागि पतिलाई लाने हुनाले भारी पनि नेपाल जस्तो बोक्नु परेन ।
नेपालीका कैयौ घरमा पति भन्दा पत्नीले ज्यादा कमाउने हुनाले पतिले ज्यादै माया गर्ने पनि देखिन्छ । नेपालमा लोग्ने मात्र कमाएर सित्तैमा आफ्नी स्वास्नीले खाएर बसेकी सोच्ने पुरुषको लागि पाठ भएको छ । अनि मेहनत गरेर कमाएर पति र सन्तानलाई खुवाउन पाउँदा महिला त्यसै हँसिली खुशीली हुन्छन ।
जीवनमा आफ्नो निजि गाडी कहिले नहोला भन्ने महिलाहरुले पनि अमेरिकामा गाडी परिवारले किन्दा मन अत्यन्तै खुशी हुन्छन त्यसमा पनि आफैले गाडीको चालक अनुमति चालक पत्र पाउँदा दंग हुन्छन किनभने नेपालमा पुरुषले चलाए मात्र काम चल्ने हुनाले महिलाले कुदाई रहनु नपर्ने हुन्छ । अमेरिकामा कुदाउन पाउँदा मन खुसि हुन्छ अनि हँसिला खुशीला त्यसै हुन्छन ।
नेपालमा भोज भतेर बाहेक सास ससुरा भएको घरमा बाहिर खाने चलन कम हुन्छ तर अमेरिकामा न कचकच गर्ने सासु नै हुन्छिन त्यसैले अमेरिकामा पकाई रहनु पनि पर्दैन बाहिर पनि प्रसस्त खाने चलन छ । तरकारी काट्नु परेन ,माड काट्नु परेन ,चौलानी को झन्झट नै भएन अनि महिलाहरु हँसिली खुसिली नदेखिए को पुरुष देखिन्छन त ?
नेपालमा सासु ,ससुरा जेठाजु ,परिवार ,आफन्त ,कुटुम्ब तथा सामाजिक कारणले जस्तो पायो त्यस्तो वस्त्र लगाउन मिल्दैन तर अमेरिकामा कसैको भय हुदैन । जस्तो लुगा लगाए पनि जस्तो प्रकारका वस्त्र लाए पनि टोक्ने कोहि हुदैन । महिलालाई आफुले रोजेको र मन परेको लुगा लगाउन पाए त्यो भन्दा खुशीको क्षण केहि हुदैन । अनि मन दंग हुन्छ । अनि अमेरिका आएका महिला हँसिला खुशीला त्यसै हुन्छन ।
अमेरिकामा पुरुषले थिचोमिचो गरे महिला सहन सक्दैनन् । द्वन्द भए र बिस्तारै घर बिग्रने पनि हुन सक्ने हुँदा सतर्क हुनु पर्ने पनि हुन्छ । नेपालमा पुरुष मात्र ज्यादा राती हिड्ने प्रचलन भएकोले अमेरिकामा आएका त्यी महिलाहरु मस्त ले राति घुम्न कसैले छेक्दैन । धित मर्ने घुम्न पाए पछि महिला त्यसै दंग । अनि महिलाहरु हँसिला –खुशीला हुन्छन ।
वर्तमान अवस्थामा नेपाली समाजमा आमुल परिवर्तन भएको छ । सोच र विचारमा परिवर्तन भएको छ । महिला र पुरुष बराबर जस्तो अवस्था पनि आई सकेको छ । महिला कुनै कुरामा कम्जोर छैनन् । पहिलेको जस्तो एकल पितृ सतात्मक सोच र विचार भएका पुरूषहरुको संख्या घट्दो छ । तर पनि अझ धंग धंगे भने छदैछ ।
जतिसुकै महिलाको अवस्थामा नेपालमा राम्रो भएता पनि नेपाली महिलाहरु तुलनात्मक रुपमा अमेरिकामा निकै हँसिला – खुशीला देखिन्छन ।
तस्बिर :बिमल नेपाल ईनेप्लीजबाट साभार गरेका हौं ।
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज संघीय संसदको प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । सरकारका पछिल्ला प्रगति र राजनीतिक…
मुकेश साह करोडौँ रुपैयाँ ठगेर फरार
वीरगञ्ज । बैंक तथा व्यापारीहरुको करोडौँ रुपैयाँ लिएर फरार भएका वीरगञ्ज घण्टाघरका व्यापारी मुकेश साह तेली फरार भएपछि पर्सा…
काठमाण्डौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले जनताले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्न…
‘यी दुई आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपालमा कहिल्यै हुनेछैन लोडसेडिङ’
काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणले दुईवटा बृहत् जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया थालेको छ। विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताको…
वि.सं.२०७५ साल साउन ११ गते । शुक्रबार । ईश्वी सन् २०१८ जुलाई २७ तारिख । नेपाल सम्बत् ११३८ ।…
नेपाली सेनाकी मेजर सुलोचना पौडेलको प्रधानसेनापति बन्ने सपना पूरा होला ?
काठमाडौं । नेपाली सेनाको सर्वोच्च पद ‘प्रधानसेनापति’मा महिला पुग्न सक्ने बाटो मेजर सुलोचना पौडेलले खुलाएकी छन् । उनले सेनाको…
विश्वकै २० प्रतिशत अक्सिजन दिने अमेजन वनमा डँढेलाे, पृथ्वीमाथि नै संकट हुने वैज्ञानिकहरुकाे विश्लेषण
राष्ट्रियसभा बैठक बस्दै, दुई विधेयक प्रस्तुत हुने
ससुरा बा ! (कथा) 30 views
समाजवादी पार्टीका नेताहरुसँग भारतीय विदेशमन्त्रीको भेट 18 views
अवैध भारुसहित भारतीय पक्राउ9views
प्रदेश २ को लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा यादव9views